कस्तो अचम्म ! माघमा पनि धान रोपाइँ – NewsAgro.com
कस्तो अचम्म ! माघमा पनि धान रोपाइँ
February 5, 2018 newsagro0Comments कस्तो अचम्म, माघमा पनि धान रोपाइँ, माघमा पनि रोपाइँ
यो समाचार 173 पटक पढिएको
मोरङ, २२ माघ । माघमा पनि धान रोपाइँ हुन्छ भन्ने धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर मोरङको हकमा भने त्यो सत्य सावित हुन्छ ।
रंगेलीका ६५ वर्षीय नारायणप्रसाद केवरतले विगत ३५ वर्षदेखि १० बिगाहा खेत अधिँयामा लिएर धान खेती गर्दै आएका छन् । केवरतका अनुसार १० बिगाहा खेतमा दुई बाली धान मात्रै लगाउने गरेको र अरु समयमा खेत बाँझै छाड्ने गरिएको छ ।
उक्त खेतमा उनले घुटराज धान रोपिरहेका छन् । माघमा रोपेको धानलाई वैशाख अन्तिममा काट्ने गरेको र जेठ महिनामा पुनः अर्को धान रोप्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले खेती गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र खर्चसमेत बढीनै गर्नुपर्ने भएको उनको भनाइ छ । सो खेतमा ६० मनदेखि ८० मनसम्म धान उत्पादन हुने गरेको छ ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीले गर्दा खेतबारीमा काम गर्ने मजदूरसमेत नपाउने गरेको र मजदूर नहुँदा खेतीपाती गर्न समस्यासमेत परेको केवरत बताउछन् । धान रोपिसकेपछि सो धानमा हाल्ने औषधि र मल नेपाल सरकारले समयमै उपलब्ध नगराउँदा कृषकले चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानको गुनासो छ ।
← एनटीसी प्रयोगकर्तालाई खुशीको खबर, अब एनटीसीमा पनि ‘ब्यालेन्स सापटी’
बिनाटेन्डर धूलो दूध र मख्खन खरिद, ५७ लाख कमिशनको डिल →
उन्‍नत जातको मकैको घोगामा दाना लागेन